उपत्यकाको निषेधाज्ञामा सहजीकरण, यातायातमा जोरबिजोर, अरू के खुले के खुलेनन् ? – जीवन शैली
Home /प्रमुख समाचार, समाचार/उपत्यकाको निषेधाज्ञामा सहजीकरण, यातायातमा जोरबिजोर, अरू के खुले के खुलेनन् ?
निजी सवारीसाधन (मोटरसाईकल स्कुटर समेत) स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायातका साधनहरु सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरुप सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एक लहरमा एक जना (कुल क्षमताको आधाबाट नबढ्ने गरी) बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
यस्तै चाडपर्व लगायत धार्मिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रममा हुने जमघट, शैक्षिक संस्था सञ्चालन, सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, व्यूटी पार्लर शैलुन, स्पा, स्वीमिङ पूल जीमखाना, समूहमा खोलिने खेल, पुस्तकालय चिडियाखाना तथा सङ्ग्राहलय सञ्चालनमा रोक लगाइएको पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ । व्यापार व्यवसायमा स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत मजदुरहरुलाई ओसार पसारमा समेत रोक लगाइएको छ ।